Ny Huawei Honor 9 Lite dia havoaka tsy ho ela ao India | Androidsis
Voamarina! Huawei dia handefa ny Honor 9 Lite tsy ho ela ao amin'ny firenena Indiana, ary azo inoana indrindra tamin'ity volana ity tao amin'ny Flipkart, ilay orinasa e-varotra monina any Bangalore.
Ity smartphone ity dia efa natomboka tany Sina taloha, manokana kokoa, amin'ny 26 Desambra tamin'ny taon-dasa, ary amidy eto amin'ity firenena ity amin'ny loko telo sy loko efatra. Manome anao ny hevitr'ity terminal ity izahay!
Ity fitaovana ity dia manana fiasa mendrika afovoany mahery amin'ny vidiny mirary, ary rehefa milaza ny vidiny dia satria, araka ny efa noresahintsika tetsy ambony, dia misy karazany telo io: ny iray manana RAM 3GB manana fahatsiarovan-tena 32GB (153 euro amin'ny fanovana), iray hafa misy RAM 4GB misy 32GB an'ny ROM (191 euro amin'ny fanovana), ary iray hafa misy RAM 4GB misy habaka fitehirizana anatiny 64GB (230 euro amin'ny fanovana).
Etsy ankilany, ny fika manokana hafa momba an'ity terminal ity dia mitovy amin'ny kinova telo.
Ny Honor 9 Lite dia manana efijery IPS LCD FullHD + 5.65-inch amin'ny refy 18: 9, izay mahatonga azy io ho tena mora raikitra ny fitaovana noho ny tery ao amin'ity takelaka ity.
Raha ny momba ny processeur sy ny GPU izay apetrak'ity finday ity, ny HiSilicon Kirin 659 miaraka amina fotony valo (4x 2.36 GHz Cortex-A53 & 4x 1.7 GHz Cortex-A53) miaraka amin'ny Mali-T830 GPU, no voafidy hitantana ireo lalao ary ireo rindranasa hampiasainay isan'andro.
Izy io koa dia manana bateria 3.000mAh, mpamaky tapakila ao ambadiky ny terminal, fakantsary efatra (roa ao ambadiky ny 13MP + 2MP misy LED Flash, ary roa hafa eo alohan'ilay vahaolana mitovy tsy misy LED Flash).
Manomeza voninahitra 9 Lite misy any India
Amin'izao fotoana izao, tsy fantatra izay fiovana havoakan'i Huawei any India, raha toa izy telo, ny sasany, na iray ihany amin'izy ireo. Tsy misy koa ireo loko izay ho hita ao amin'io firenena io, na amin'ny fotoana marina.
Andao hiandry ny fanamafisana farany avy amin'ny orinasa sinoa, izay azo antoka fa tsy hiandry ela.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Huawei Honor 9 Lite dia havoaka tsy ho ela ao India
Samsung copilot: ny fampiharana manakana anao tsy hatory amin'ny kodiarana